घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू फ्रैंक लम्पर्ड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल लीजेन्डको पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा प्रसिद्ध हो; 'सुपर फ्रान्की'। हाम्रो फ्रान्क ल्याम्पार्ड चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
चेल्सी एफसी लेजेन्डको विश्लेषणमा प्रख्यात भन्दा पहिले उनको जीवन कहानी, पारिवारिक जीवन र धेरै बन्द र ओएन-पिच थोरै ज्ञात तथ्यहरू उहाँसँग सम्बन्धित छ।
योचिम कम बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
हो, फ्रान्कीका लक्ष्यहरू र सहयोग रेकर्डको बारेमा सबैलाई थाँहा छ र उनको ट्रफी दौड तर केही उनको जीवन बाहिर पिच बाहिर जो धेरै रोचक छ विचार गर्दछ। अब थप adieu बिना, हामी सुरु गरौं।
फ्रान्क ल्याम्पार्ड बचपन कहानी - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि:
फ्रान्क जेम्स लैम्पर्डको जन्म २० जून, १ 20। On मा रोमफोर्ड, लन्डन, इ England्ल्यान्डमा फ्र्याक लैम्पार्ड, वरिष्ठ (बुबा) र प्याट लैम्पार्ड (आमा) मा भएको थियो।
ऊ फुटबलरहरूको परिवारबाट आएको हो र उहाँ आफ्ना बाबुआमाको कान्छो सन्तान हुनुहुन्छ। सानो फ्रान्कका लागि यो स्कूल र फुटबलको बारेमा थियो।
फ्रान्क लैम्पार्ड एक शानदार बच्चा र पछि उनीको कक्षाको शीर्ष थियो जब उनी १ 1989 1994 and र १ XNUMX XNUMX from देखि ब्रेंटवुड स्कूलमा पढेका थिए। उनले आफ्नो GCSEs पूरा गरे र A + समानान्तर कमाए। उनको फुटबल प्रति प्रेम एकदमै युवावस्थामा देखियो।
फ्रान्की अनुसार 'म धेरै जवान थिएँ जब मैले फुटबल मनपराउन थालेको थिएँ। म मान्छेहरूको परिवारमा बढेको छु जसले खेल मन पराउँथे म लामो समय सम्म मसँग पनि सम्झन सक्छु।
म आमाको केटा थिएँ किनकि म अन्तिम बच्चा थिएँ। फुटबल खेल्नु भन्दा पनि मलाई पढ्न मन पर्थ्यो। मेरो आमा जो एक लाइबेरियाको थियो मलाई पढ्न मन पराउनु भयोकिताबहरू। म सधैं सम्झना गर्छु कि पश्चिम हाम र विशेष रूप से हैरी रेडकोप्पप र मेरो बुबाले मेरो क्यारियर सुरू गर्न मद्दत गर्यो।
फ्रान्क लैम्पार्ड बाल्यकाल जीवनी - स्कूल क्विज:
सानो छँदा स्कूलमा फ्रान्कीले एउटा कारणको लागि शिक्षामा लगातार ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा फुटबलर बन्ने संकल्प गरे।
त्यो हो 'शंकास्पद गलत प्रमाणित गर्न'। शंकास्पद यहाँ उसका स्कूल साथीहरु र शिक्षक सामिल छन्। अब हामी तपाईलाई सार दिन्छौं;
फ्र्याक ल्याम्पार्डले यसलाई राख्छ: “स्कूलमा मलाई जागिरको लागि मैले के गर्न चाहेको भनेर कागजहरू लेखेको सम्झना आउँछ। मैले फुटबलर हाले र शिक्षकले मलाई भने कि फुटबलर हुनु कुनै काम होइन।
उनले मलाई 300०० मध्ये एक बच्चालाई मात्र यो एक फुटबलर बनाउँछ। अनि उनी भन्छिन्: 'के तपाईं आफू एक हुनुहुनेछ जस्तो लाग्छ?' मैले भने: 'हो म गर्छु'। र मेरा सहपाठीहरू त्यहाँ बसेर मलाई हाँस्थे। "
यो फ्रान्कीको लागि निर्णायक मोड हो, एक पटक उसले निर्णय गरे कि उसले आफ्नो जीसीएसईको परीक्षा पछि फुटबलमा केन्द्रित हुनेछ। उसको दिमाग बनाउनु तपाईलाई सजिलो थिएन।
यो श्री बुक्कले (तल पिक) नाम गरेका एक शिक्षक थिए जसले उसलाई आवश्यक अभिभावक र रद्द गर्दै आएका थिए।
लम्पर्डले यस्तो लेखे: "ब्लेलेले मलाई गम्भीर समय दिए जब मैले निर्णय गर्यो कि मेरो जीसीएसईएस पछि विद्यालय छोड्न र फुटबल क्यारियर लिईयो।"
जोड्दै: "उनको व्यक्तिगत सम्पर्क, बाटोको साथ प्रोत्साहन निकै प्रशंसा गरिएको थियो।
अन्तमा, उनले भने: "एक शिक्षकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका मध्ये एक हो आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सपना र आकांक्षा पूरा गर्न प्रेरित गर्न। श्री बाउक्ली असल शिक्षकको प्रमुख उदाहरण थिए "
फ्रान्क ल्याम्पार्ड पारिवारिक जीवन:
फेथर: उनको पिता, फ्रैंक रिचर्ड जर्ज लैंम्पर्डले फ्रान्स रिचर्ड लम्पर्ड (एक्सएनएक्सएक्स-एक्सएनएक्स) र हलिडा डी स्टिल्स (20 जन्मिएको) लाई 1948 सेप्टेम्बर 1920 जन्मियो।
उहाँ एक अंग्रेजी सेवानिवृत्त पेशेवर फुटबलर हुनुहुन्छ जो एक पल्ट बायाँ ब्याक को रूप मा खेलाए। उनले दक्षिण अफ युनाइटेडका साथ दक्षिण अफ्रिका युनिभर्सिटीको छोटो म्याग्दीको लागि आफ्नो क्यारियर खेलेका छन्।
उनीसँग एक बहिनी Gwendoline छ, जो एक वर्ष भन्दा सानो छ। उहाँ एक्लै पाँच वर्षको उमेर हुँदा उनको बुबा 1953 मा 33 मा मृत्यु भयो।
फ्रान्क लैम्पार्डको बुवा पूर्व क्वीन्स पार्क रेंजर्स र टोटेनह्याम प्रबन्धक ह्यारी रेडकनप्पको सासु हो।
उनी पूर्व इ England्ल्यान्ड, लिभरपुल, टोटेनहम र साउथेम्प्टन खेलाडी जेमी रेडकनाप्पका काका पनि हुन्।
उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो छ। १ 1994 2001 to देखि २००१ सम्म वेस्ट ह्याममा उनको भानुजी ह्यारी रेडकनप्पको सहयोगीको रूपमा काम गरे। उहाँ हाल फुटबल सल्लाहकार हुनुहुन्छ।
सुपर फ्रान्कीले हुर्कदै गर्दा आफ्नो बुबासँग राम्रो सम्बन्धको आनन्द उठाए जसलाई उनले प्रायः आफ्नो क्यारियरको पछाडि मस्तिष्कको रूपमा लिन्छन्।
मातृभाषा: लेट पेट्रिशिया ह्यारिस लैम्पार्ड फ्रान्क लैम्पार्डकी आमा हुन्। निमोनियाको जटिलता पछि अप्रिल २०० 24 को २ 2008 तारिख उनको निधन भयो। उनको परिवारको उदासिनताको कारण उनलाई गाडिएको थियो।
यो रिपोर्ट गरिएको छ कि उनको अकाल मृत्यु पछि, कलकस बर्गरले उनको महँगो गहना पत्ता लगाउनको लागि खाली घर लुटेर लगे।
चोरहरूले सम्पत्ती लुटेर फर्निचर नष्ट गरिदिए र भित्ताबाट कपाटहरू तान्दै गर्दा उनीहरू खोज्दै थिए - तर श्रीमती ल्याम्पार्डका सबै गहनाहरू उनको छोरीको मृत्यु भएपछि उनीहरू खाली हातबाट फुत्किए।
तिनीहरू सञ्झ्याल खोलेको पछाडि सम्पत्ति प्रविष्ट गरेको विश्वास गरिन्छ। त्यसबेला कोही पनि घरमा थिएनन्।
श्री लैंपर्ड स्नरले सूर्यलाई यसो भने: 'तिनीहरूले सही गडबड गरे। तिनीहरू स्पष्ट रूपमा पैसा र गहना खोज्दै थिए तर त्यहाँ केही थिएन। त्यहाँ जंक ज्वेलरीहरू रहेको थियो तर तिनीहरूले लिएनन्। तिनीहरू के चाहन्छन् भनेर तिनीहरूलाई थाहा थियो। '
फ्रान्क लैम्पार्ड प्रेम जीवन:
फ्रान्क लैम्पार्ड स्पेनिश मोडेल एलेन रिवासको प्रेममा पर्‍यो। यद्यपि, उनले उहाँसँग वेदीमा कहिल्यै पनि बनाइनन्।
उनले एलेन रिवाससँग सात वर्ष बिताए, जससँग उनका दुई छोरीहरू लुना (जन्म २२ अगस्त २०० 22) र इस्ला (जन्म २० मे २०० 2005), २०० in मा विभाजन गर्ने निर्णय गर्नु अघि।
त्यो वर्ष २००,, फ्रान्क अर्को महिला भेट्छन्। क्रिस्टीन बारमा आएपछि फ्रान्क पियर्स मोर्गनसँग थिए जब फ्रान्कले भने,
"त्यो को हो? उनी फरक देखिन्छन् ...उनी आकर्षक छिन्। " ... "उनले भर्खरै तपाईको जीवनसाथीलाई हेरी। सोचिन् उनले तपाईंलाई पनि मन पराउछिन् र तपाईंको साना केटीहरूलाई पनि मन पराउनु पर्छ! " पियर्स भने।
अर्को कुरा, तिनीहरू सँगै थिए। अर्को दिन, फ्रान्क इ England्ल्यान्डका लागि खेल्नको लागि यात्रा गरे र उनीहरू हरेक रात चार घण्टा बोल्थे र केवल एक हप्तामा पागलपनमा डुबे।
त्यस बेलादेखि लेम्पार्ड टेलिभिजन प्रस्तुतकर्ता क्रिस्टिन ब्लाईकलेसँग सम्बन्धमा रहेको छ। १ June जुन २०११ मा, उनीहरूको सगाई ल्याम्पार्डको एजेन्टले घोषणा गर्‍यो।
चार वर्षको सगाई पछि, दम्पतीले डिसेम्बर २०, २०१ on मा विवाह गरे।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने एलेन रिभाससँगको सम्बन्धबाट फ्रान्कीका छोरीहरू क्रिस्टीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छन्।
'कहिलेकाहीँ क्रिस्टीन र केटीहरूले मलाई गिरोह गर्छन्' फुटबलले भन्यो।
फ्रैंक लम्पर्ड जारी छ...'एफवा म, त्यो राम्रो छ, किनभने एक सम्बन्धमा जाँदा, कदम-अभिभावक भूमिका कडा छ। बिन्दुमा पुग्न को लागी केटीहरु भन्छिन्, "हामीले क्रिस पाउनुभयो र हामी तपाईंलाई क्रिसमसलाई माया गर्छौ, शानदार छ।"
उहाँले थप गर्नुभयो: 'त्यसपछि पछाडि, मलाई एक जना पिता हुनुहुन्थ्यो र यो कठिन थियो। मलाई सम्झँदा म कामबाट फर्केर आउनुहोस्, थकित भए, र तिनीहरूले आफ्नो कोठामा गडबड गरेका छन्, मलाई निराश हुन्छ। यो निश्चित रूपमा मलाई क्रिस्टीन र उनको र केटीहरू बीच भएको हुनाले बन्धनमा सहयोग गरेको छ। '
उनकी छोरीहरु अब किशोरावस्थामा पुगेको संग, फ्रान्क भन्छन् उनी उनीहरुलाई धेरै पैसा दिएर बिगार्न चाहँदैनन्। उहाँ तिनीहरूलाई बाहिर जान र आफ्नै पैसा कमाउन आग्रह गर्नुहुन्छ। यस द्वारा, तिनीहरूले जीवन अधिक कदर गर्नेछन्।
उसले भन्यो: 'म तिनीहरूलाई प्राय: क्रिष्टमसमा र उनीहरूको जन्मदिनहरूमा धेरै पैसा दिन्छु, म सक्दो गर्छु, तर तिनीहरूलाई बिगार्न चाहन्न।
म १ or वा को ब्राट चाहन्न 14। म तिनीहरूलाई अझै बाहिर जान्छु र आफ्नै पैसा कमाउन भन्छु। शाब्दिक रूपमा, तिनीहरूले £ 5,000 हप्ताको पकेट पैसा प्राप्त गर्छन्। '
फ्रान्क Lampard जीवनी - उनी उहाँलाई छोडेर पछुताए:
फ्रान्कका पूर्व मंगेतर र फ्रान्कका छोरीकी आमा, स्पेनी मोडेल एलेन रिवासले भर्खरै यो कुरा स्वीकार गरेको छ त्यो अझै तारा संग प्रेम मा छ र उहाँसँग मेलमिलाप गर्ने आशा राख्छ - क्रिस्टिन ब्लाईक्लेसँग उसको नयाँ रोमान्सको बाबजुद।
क्रिस्टाइनसँग ल्याम्पार्डको रोमान्सको खबर आउँदा उनी देशबाट बाहिर थिइन। मिस राइभ्स अब आफ्ना अन्य छोरीहरू लुना, चार र दुई बर्षे इल्लासँग बस्दै छिन्। एउटा छ वटा कोठाको घरमा लैम्पार्डले २.2.85 मिलियन डलर किनिदिएको छ।
लाम्पर्ड दुई अन्य महिलासँग सम्बन्धित छ भन्ने शंका गरेपछि मुटु स्पोकित स्पेनिश गोराले विवाह भोजमा बोलाए र उनी बर्बाद भएको कुरा स्पष्ट गरे।
उनको शब्दहरूमा; 'म साह्रै दु: खी थिएँ। उसले मेरो मुटु तोड्यो, म रोएँ। हुनसक्छ म हतारमा थिएँ उसलाई मेरो जीवनबाट।
तर आज, मिस राइभ्सले भनिन् कि उनले अर्को सम्बन्ध शुरू गर्नु पर्दैन, यसो भन्दै: 'उनले फ्रान्कको बारेमा सोच्दा पनि नयाँ सम्बन्ध सुरु गर्नु उचित हुँदैन।
उनले यो पनि जोड दिए कि उनी कहिल्यै अर्को फुटबलर डेटि would गर्दिन, 'नाई नाई नाई। मलाई मितिहरूमा सोधेको छ, निस्सन्देह, ती अन्य फुटबलरहरू, तर म सबैलाई होईन भन्छु। '
उनले स्वीकार गरे कि त्यो संघर्ष गरिरहेको छ, उनले भने: 'फ्रान्कले बच्चाहरूलाई समर्थन गर्दछ, तर मैले काम गर्नु पर्छ। स्पष्ट छ, उनले मलाई घर दिए, तर बाँकी मैले आफै गर्नु पर्छ।
यो एकल आमा हुनु गाह्रो छ। मलाई कहिलेकाहीं एक्लो महसुस हुन्छ। म रिसाएको छु, तर म बलियो हुनुपर्छ। मसँग क्षणहरू छन् जब म रुन्छु र लुक्न चाहन्छु, तर मेरा बच्चाहरू र साथीहरूले मलाई मार्छन्। '
लाम्पर्ड पूर्ण रूपमा सारिएको छ भन्ने पुष्टि पछि, रिभ्सले आफ्नो जीवन र क्यारियरको पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्‍यो। उनले एक पटक आफूलाई अधोवस्त्र डिजाइनरको रूपमा पुन: स्थापित गर्नुभयो, टेस्कोको लागि नयाँ स a्ग्रह शुरू गरेकी।
फ्रान्क लैम्पार्ड अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू - किन केही अमेरिकीहरूले उनलाई घृणा गर्छन्:
२ September सेप्टेम्बर २००१ मा, फ्रान्क लैम्पार्ड र अन्य तीन चेल्सी खेलाडीहरूसँग क्लबले उनको व्यवहारको लागि दुई हप्ताको ज्याला जरिवाना तिर्नु प 23्यो १२ सेप्टेम्बरमा।
सेप्टेम्बर ११ का संयुक्त राज्य अमेरिकामा समन्वय गरिएको आक्रमण पछि यो ly घण्टा मात्र भएको थियो। बेलाइतका सबैजना सोबर मोडमा हुनु पर्ने अपेक्षा राखिएको थियो तर मतवाला फ्रान्क लाम्पार्डले धेरै अमेरिकी पर्यटकहरूको रात बिगारेको थियो।
लाम्पार्ड र उनका साथीहरूले एक पछि मात्र हीथ्रो होटेलमा अमेरिकी पर्यटकहरूलाई दुर्व्यवहार गरे 11 सेप्टेम्बर हमला। एक होटल प्रबन्धकले भने, “तिनीहरू एकदम घृणित थिए। तिनीहरूले भर्खर के भएको थियो भन्ने बारे वास्ता गरेनन् "।
फ्रान्क लैम्पार्ड जीवनी तथ्य - उनले स्वानसी शहर मा loanण मा समय खर्च गरे:
उनले आफ्नो जीवनमा स्वान्सियस सिटी फिर्ता फिर्ता ऋणमा समय खर्च गरे, लम्पार्डले लन्डनमा समय स्वीसान शहरमा बिताए। उहाँ अक्टोबर 1995 र जनवरी 1996 बीच नौ खेलहरूमा देखा पर्नुभयो।
फ्रान्क ल्याम्पार्ड जीवनी - उच्च आईक्यू:
जब तपाइँ पिचमा फ्रान्क ल्याम्पार्ड हेर्नुहुन्छ, यो स्पष्ट छ कि ऊ एक अत्यधिक बुद्धिमान खेलाडी हो र खेल राम्रोसँग पढ्छ।
यो केवल उसको फुटबल आइक्यू मात्र होइन जुन उच्च छ। उनले चेल्सीमा आफ्नो समयमा १ 150० को प्रभावशाली आईक्यू स्कोर रेकर्ड पनि गरे। यो परीक्षणहरू सञ्चालन गर्ने कम्पनीले रेकर्ड गरेको उच्चतम सेटहरू मध्ये एक हो।
चेल्सी एफसीको चिकित्सक ब्रायन अ English्ग्रेजीले गरेको रिपोर्ट अनुसार,
'लेम्पार्ड फुटबलका एक सबैभन्दा बुद्धिमान मानिस मध्ये एक हो जुन उसको आईक्यू टेस्टले प्रमाणित गर्छ। फ्रान्क लैम्पार्डले १ marks० अंकको उच्चतम सेटमध्ये एक स्कोर बनाए। कम्पनीले परीक्षण गरिरहेको रेकर्ड गरिएको हो।
फ्रान्क ल्याम्पार्ड पुस्तकहरु - उनले बच्चाहरु को लागी १ 18 लेखेका छन्:
फ्रान्क ल्याम्पार्ड वास्तवमा एक विशेष प्रतिभा हो। आफ्ना शौकहरूको लागि, फ्रान्क पढ्न, लेख्न र फुटबल खेल्न मन पराउँछन्। ऊ आफ्नो फ्रान्कीको जादू फुटबल पुस्तकहरु लेख्न को लागी सुन्दर खेल खेलेको संगठित गर्न सक्षम छ, पढ्न को लागी उसको प्रेमलाई कम गर्न मिल्दैन।
लैंप एक अनुभवी बालबालिका पुस्तक पुस्तक लेखक हुन् जसको नाममा 18 प्रकाशनहरू।
उनले शीर्षकको एक आत्मकथा पनि लेखेका छन्; पुरातया फ्रैंक: फ्रान्स लम्पर्ड को आत्मकथा।
यहाँ केहि सोधिने प्रश्नहरू छन्
पहिले, तपाइँ कसरी जादू फुटबल किताबको विचार प्राप्त गर्नुभयो? ... फ्रान्क प्रतिक्रिया ...
'I मेरा दुई केटीहरूलाई पढेर अन्य कथाहरू पढे। फूटबल भनेको उसको जीवनको ठूलो अंश भएको रूपमा मैले सोचे कि युवा केटाहरू र केटीहरूको लागि जादू फुटबलको वरिपरि कथाहरू सिर्जना गर्नु रमाईलो हुनेछ। '
दोस्रो, उहाँ तिनीहरूलाई लेख्न को लागी कति समय लाग्यो? ... फ्रान्क प्रतिक्रिया।
'प्रत्येक पुस्तक मलाई लेख्न को लागी धेरै समय लाग्यो। म सामान्य नोटहरू लेख्छु जब मसँग फरक समयमा विचारहरू हुन्छ र त्यसपछि म कथाहरू सँगै राख्छु जब म घरमा छु वा फुटबलको लागि यात्रा गर्दैछु। '
उहाँ एक वयस्क फिल्ममा रियो फर्डिनान्डको साथ देखा पर्नुभयो:
२००० मा, ल्याम्पार्ड, रियो फर्डिनान्ड र किरोन डायर एक वयस्क भिडियो शूटमा देखा पर्‍यो जुन साइप्रसको आइया नापाको छुट्टी रिसोर्टमा फिल्माइएको थियो। लाम्पर्डले पिचमा बोलेको जस्तो गरी सम्पूर्ण अवस्था बिर्सियो।
वेस्ट हामको उत्पादन:
ल्याम्पार्डको लामो र सफल क्यारियर वेस्ट ह्याम युनाइटेड (जहाँ उनका बुबाले खेले) १ 1994 XNUMX in मा युवा टीममा सामेल भए पछि शुरू भयो।
एक बर्ष पछि उसले आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र त्यसपछि स्वानसीमा loanणमा गए जहाँ उनले appea उपस्थिति बनाए र आफ्नो पहिलो क्यारियर गोल बनाए।
उनले १ 11 1996 / / १ 1997 XNUMX season सत्रमा ११ सुरु गरेर वेस्ट ह्याममा प्रवेश गरे, तर टुक्रिएको खुट्टाले उसको अभियानको चाँडै अन्त गर्दछ। उनी र उनका दुई साथीहरू (एशले कोले र जॉन टेरी) अर्को मौसम प्रभावित।
फ्रान्कले आफ्नो पहिलो टोपी-चाललाई 1998 / 1999 सिजनमा क्लबको लागि बनायो। उनी एक प्रमुख खेलाडी थिए र ह्यामरले आफ्नो सर्वोच्च प्रिमियर लिग समाप्ति (5th) लाई उच्चतम बनाए।
फ्रान्क ल्याम्पार्ड जीवनी - ऊ किन आकाशमा औंल्याउँछ:
“म मेरो ढिला आमा र मेरी सानी केटी लूनाको लागि मैले आकाशलाई औंल्याएको छु। स्पेनीमा उनको नामको अर्थ 'मून' हो। त्यसोभए त्यो सुरु भयो जब उनी जन्मे, स्पष्टतः।
मेरो औंलामा औंठी चुम्बन मेरो प्रेमिकाको लागि हो। त्यसो भए यो सबै धेरै परिवार आधारित छ, " इंग्लैंडले अन्तर्राष्ट्रियलाई भने।
उसको Badgekissing समारोह उनको प्रेम र चेल्सी FC मा बफादारी देखाउँदछ। यद्यपि यो प्रश्न उठेको थियो जब उनी म्यान सिटीको लागि खेल्न सहमत भए र आफ्नो प्यारो चेल्सीको बिरूद्ध पनि गोल गरे।
फ्रान्क लैम्पार्ड जीवनी - चेल्सी बिरुद्ध स्कोर गर्दै:
एटहादमा चेल्सीको साथ १-१ को बराबरीमा आफ्नो नयाँ क्लब म्यानचेस्टर सिटीको बराबरीमा गोल गरेपछि फ्रान्क लैम्पार्ड लगभग बोलेको थिएन।
स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा १ 13 बर्ष बिताएको चेल्सीका पौराणिक कथा लेम्पार्डलाई ब्यान्चबाट बाहिर आउँदा भ्रमण गर्ने प्रशंसकहरूले भनेका थिएनन् तर जेम्स मिलनरले एन्ड्रे शुर्लेको 71१ औं मिनेटको ओपनरलाई रद्द गर्न पछि उनलाई minutes मिनेटमा हिर्काए।
36 वर्षीयले लक्ष्य मनाउन नसक्ने एक बिन्दु बनाएका थिए, र उनले मिश्रित भावनाहरुमा भर्ती गरे।
उसको अनुसार: “यो वास्तवमै गाह्रो छ। म अव्यावसायिक हुन्छु यदि म आउँदिन र मेरो काम गर्दिन, त्यसैले म बक्समा छिर्न प्रयास गर्दै थिएँ र यो मिलीबाट फिर्ता एक ठूलो बल थियो।
यो मेरो लागि गाह्रो छ। मैले चेल्सी प्रशंसकहरूसँग १ amazing आश्चर्यजनक वर्षहरू थिए, त्यसैले म यससँग मिसिएको छु। म स्पष्टतः खुशी छु कि मैले खेल्ने टोली ड्र बराबरी भयो तर हार भने होइन।
म खुशी थिए कि मैले एक गोल गरेन जसले तिनीहरूलाई खेल हराउँदछ। म शब्दहरु को लागी हराएको थियो। म आउने आशा गरेन र यस जस्तो स्कोर।
चेल्सी फ्यानहरू मैले गएको समयमा गइरहेका थिए, र भावनात्मक छ। त्यसो भए म यस क्लबको लागि खेलिरहेको छु जसले मलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ लिएको छ, त्यसैले म यहाँ बीचमा अडिग छु। ”
शहर मालिक म्यानुएल पेलेग्र्रिनी भन्छिन् कि उनले लम्पर्ड प्रयोग गरेर दुई पटक सोधेनन्।
उसले भन्यो: “मैले उनलाई सोधेँ कि उनी पनि यसमा संलग्न हुन चाहन्छन्, र पक्कै पनि उनी पनि यसमा संलग्न हुन चाहन्छन्। यसले देखाउँदछ कि एक पेशेवर लेम्पार्ड कती राम्रो छ।
उनले जारी राखे ... "म पक्का छु कि उनी आफ्नो क्यारियरको महत्वपूर्ण टोली बिरुद्द गोल गर्न खुसी छैनन्, तर उनी एक राम्रो प्रोफेशनल छन्, उनी एक धेरै राम्रो खेलाडी हो। '
चेल्सी मालिक Jose Mourinho, जसको लागि लैम्पर्डले स्टामफोर्ड ब्रिजमा आफ्नो पहिलो हिज्जेको समयमा यस्तो महत्वपूर्ण व्यक्ति थियो लक्ष्यको बारेमा पनि दार्शनिक थियो।
Mourinho यसो भन्नुभयो: 'उनी म्यान सिटीका खेलाडी हुन्। म जोश र हृदयको यी ईतिहासहरूमा विश्वास गर्दिन, म यीमा विश्वास गर्दिन।
हुनसक्छ म फुटबलमा धेरै व्यावहारिक छु। जब उनले मानस शहरमा आउने निर्णय गरे, चेल्सीको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी, प्रेम कथाहरू सकियो। उनले सुपर प्रोफेशनलको हैसियतमा आफ्नो काम गरे र उसले राम्रो गर्यो। ”
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 17